3-programa fisorohana ampahany | Valin'ny Fanamarinana
Home Miala amin'ny Porn Ny fandaharan'asa telo amin'ny fisorohana ny Reward Foundation
Ny programa fisorohana anjara telo an'ny Reward Foundation
Ny fisorohana ny fiankinan-doha amin'ny pôrnôgrafia dia zava-dehibe toy ny fanohanana ny fahasitranana.
Ny tsirairay dia manana anjara amin'ny fanampiana ny hafa hisoroka ny fiankinan-doha. Ny fampiasana sary vetaveta amin'ny Internet dia loza mananontanona amin'izao fotoana izao. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy manaiky akory fa mety hampidi-doza izany.
Ny fisorohana dia mora kokoa noho ny fanarenana. Ny ankamaroan'ireo mpidoroka dia mety hampiato ny fitondran-tenany mihetsiketsika amin'ny farany. Na izany aza, mety mbola tsapan'izy ireo ihany fa izy ireo dia mpidoroka amin'ny fiainany sisa. Zavatra tsy misy dikany izany.
Ny fandaharan'asam-pihetseham-panoherana valisoa dia manoro hevitra fa isika
Ampianaro ny olona ny fomba fiasan'ny rafitra valim-pitia ary ny antony tsy ahafahana manadino porno dia hevitra tsara. Jereo ny fizarana misy anay Brain Basics.
Manomeza fanohanana ara-tsaina raha ilaina izany. Mitadiava fanampiana amin'ny olona iray antsoina hoe (any Ekosy) na amin'ny alalan'ny torohevitra matihanina. Hevitra iray hafa dia ny famakiana ireo olana atrehin'ny olona amin'ny tranonkala fanavotana. Izany dia afaka manome anao fitaomam-panahy hiatrehana ny trauma taloha na ny fifandraisana amin'ny fifandraisana
Ampianaro fahaiza-miaina mba hanampiana ny olona hanana fiainana feno fahasambarana. Ny olon-drehetra dia mila toeram-pivarotana izay manohana ny fanehoana fihetsem-po sy ny fivoaran'ny tena manokana. Anisan'izany ny fanabeazana ara-nofo sy ara-pahasalamana ara-pahasalamana mifototra amin'ny fiasa rafitra valisoa voalanjalanja. Izany dia mitaky fikasana fifandraisana tsy misy dikany, feno fiheverana, fanajana, fitiavana.
Nahoana isika no manoro hevitra izany?
Fomba fisorohana fa tsy fanasitranana - tsy misy fanafody sy mora vidiana
Mampihena ny fiankinan-doha amin'ny ankapobeny
Ny fanalahidin'ny fahasambarana sy ny fiainana lava dia ny fitiavana
Tsara ny firaisana ara-nofo sy ny fifandraisana
Ny fahitantsika dia ny hahazoan'ny rehetra mahazo fahazoana tsara, fanabeazana mifototra amin'ny porofo, mifototra amin'ny marina sy mifandray.
Loharanom-pihetseham-po maromaro noho ny antony samihafa, saingy ny vokatry ny mahantra na ny tsy firaisana ara-nofo sy ny fanabeazana momba ny fifandraisana dia matotra. Tsy azontsika atao ny tsy miraharaha ny fiantraikan'ny pôrnôn'ny aterineto eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny fiarahamonintsika. Zava-dehibe indrindra amin'ireo taranaka ho avy izany. Olana ara-pahasalamana mateti-pitranga izany.
Ny Foundation Reward dia vonona ny hampivelatra fiaraha-miasa hanohanana ny fahazoana fitaovam-pampianarana tsara any amin'ny sekoly rehetra ary amin'ny toerana hafa izay ilainy.
<< Modely fanarenana dingana 3 TRF